Kushambadzira Kune Musoro Kune Mubairo Here? | Martech Zone
Kushambadzira Kune Musoro Kune Mubairo Here?
Chipiri, May 29, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Makore apfuura, Seth Godin vakanyora mutsara wakakurumbira Mvumo Kushambadzira uye akanyora bhuku rinonakidza pairi. Ndine kopi yakanyorwa mifananidzo yandinokoshesa uye ndatenga bhuku rese kubvira. Mvumo-based kushambadzira inonakidza nekuti mutengi wako akakupa mvumo yekushambadzira kwavari - chibvumirano chakanaka.
Ndangotora Hupfumi Hwakadzika: Hupfumi hweMagariro uye Ramangwana Rakasimba by Bill McKibben pakurayirwa kweshamwari yakanaka Pat Coyle. Ndakaverenga chitsauko chekutanga uye ndakapindwa muropa. Iri bhuku rinotenderera rakanangana ne 'Sevha Pasi' padivi rebhizinesi asi rinopa maonero akasiyana pariri iro randinotenda.
Ini handisi 'girini nekutadza' mhando yemunhu. Ini ndiri zvechokwadi munhu anotenda mune zvemari uye rusununguko. Kana iwe uchida kuenda kutyaira iyo SUV inopisa toni yegasi, ndiyo yako kodzero. Kana iwe uchida kusazvibata uye nekuparadza nyika, saka enda mberi uye edza. Ehe neniwo ndinotenda mune chiyero chesimba nedemokrasi kuyedza kukumisa. Kupfuura zvese, ndinotenda mukuzvidavirira kwega zviito zvemunhu… izvo zvinondisvitsa pakushambadzira zvine mutoro.
Muno muIndiana, ivo vachapa chikwereti chemba kune chero munhu. Kunyangwe dzimba dzacho dzichikwanisika, Indiana ine imwe yeanokurumidza kukura mitengo yekuregedza munyika. Iko kupi kuzvidavirira kwevanhu vanotengesa dzimba idzi kuvanhu vavanoziva kuti havagone kuwana? Kana Chiremba akaraira vanodhakwa marwadzo mhondi kune akapindwa muropa, isu tichava takagadzirira kuvakanda mutirongo. Asi mushambadzi asina hanya anotengesa zvigadzirwa kana masevhisi kune vanhu vasingazvide haangobatirirwa kumusana, ivo vanowana mubairo wezvemari. Tengesa zvimwe kune zvakawanda… ndiyo motto yekutyaira!
Ndichadzokera kutsamba yangu nezve kuzvidavirira kwekanguvana ... ndinotenda kuti tine mhosva yezvedu zviito. Ini zvakare ndinofunga tinofanirwa kuisa kumanikidza kune avo vanoedza kushandisa kana kushandisa zvinodiwa nevanhu uye zvavanoda. Kushambadzira zvine mutsindo kunofanira kukunda. Kushambadzira zvine mutsindo zvinoreva kushambadzira chigadzirwa kana sevhisi iwe yaunoziva kuti mumwe munhu anoda kune mumwe munhu anozvida. Vashambadzi vane mutoro vanoita vatengi nyasha, vachivachengetera nguva kana mari…. kwete kuvatengesa chimwe chinhu nekuda kwekuchitengesa.
Pakati pechitsauko chekutanga cheEconomic Economy, inopokana pfungwa yekuti 'zvimwe zvirinani' - tsika inosimbirwa nehurumende nevatengesi. Unogara uchikurudzirwa kutenga toy nyowani, mota nyowani, imba nyowani… idya, pedza, pedza uye iwe uchave unofara. Asi hatisi kufara. Ini handizoenda mune zvakadzama pane izvi - zvese zviri mune zvangu Mufaro Manifesto. Ini ndinongovimba apo pandinoverenga bhuku racho kuti haridanidzi 'girini' asi rinosundira minimalistic nzanga dzinozvibata ivo pachavo kuti vazvidavirire.
Rega kutengesa zvakawanda kune zvimwe. Tengesa zvimwe nekutsvaga vanhu vaunoziva vanozvida! Kana icho chinangwa chekuwana kwako chiri kungoita kuti uwedzere kuchengetedza kwako, pamwe hausi kutengesa zvinhu zvako kuboka chairo - kana pamwe hauna chigadzirwa chakanaka kana sevhisi yekutanga.
Tags: Bill McKibbenhupfumi hwakadzikapat coyle
Unodikanwa: Technologist Extraordinaire